ससुराले बिदेश जाँदा देको ८० हजार पनि तिरेको छैन अमृताले,जेठी श्रीमतिको घर पुग्दा किन यस्तो ? भिडियो हेर्नुहोस – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/ससुराले बिदेश जाँदा देको ८० हजार पनि तिरेको छैन अमृताले,जेठी श्रीमतिको घर पुग्दा किन यस्तो ? भिडियो हेर्नुहोस
ससुराले बिदेश जाँदा देको ८० हजार पनि तिरेको छैन अमृताले,जेठी श्रीमतिको घर पुग्दा किन यस्तो ? भिडियो हेर्नुहोस
261 Less thanaminute
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला,काठमाडौं : विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। सगरमाथाको उचाइ ८६ सेन्टिमिटर बढेको छ। अब सगरमाथाको उचाइ ८,८४८.८६ मिटर पुगेको नापी विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेका हुन्।
सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनले एकैपटक मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपाल सरकारले पहिलोपटक आफ्नै प्राविधिक टोलीबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर सार्वजनिक गरेको हो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो।
विभागले १३ करोड खर्चेर झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सगरमाथाको मापनकार्य सम्पन्न गरेको थियो। विसं २०७२ मा गएको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ घटबढ भएको हुनसक्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भएपछि नेपालले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत साधनमा सगरमाथाको उचाइ नापेको हो।
४७ बर्ष जेठ्ठो संग बिवाह गरेकी २२ बर्षीया पुजा एक्कासी रुदै मिडियामा
लक्ष्मीले मैले गल्ती गरेँ माफी देउ भनेपछि किशोर पनि मिडियामा, खुलाए लक्ष्मीसंग विवाह गर्न मन्दिर नआउनुको कारण (भिडियो हेर्नुस्)
यिनै हुन पापी डोजर चालक जस्ले जिउदै महिलालाई पुरेका थिए (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत, भन्छन्, ‘श्रीमती बाँचीरहकी भए आज हामी उन्को जन्मोत्सब मनाईरहेका हुन्थ्यौँ ‘(भिडियो हेर्नुस्)
छ महिना अगाडि चम्सुरीको घरमै गएर छोरीसहित लिइएको रमाइलो कुराकानी(भिडियो हेर्नुहोस)